IVodafone yam ihlaziywa yoyilo olutsha | IPhone iindaba
Ngoku phantse zonke iinkampani zeefowuni zinezicelo zazo zokulawula uninzi lwamacandelo emigca yethu yesivumelwano. Lowo wayefuna ukuthatha elona thuba lide kulo msebenzi yayinguYoigo, kwaye kwafuneka siye kwizicelo zomntu wesithathu, kodwa ngoku inesicelo sayo. Kule meko siza kuthetha ngayo I-Vodafone yam, usetyenziso lweselfowuni iVodafone luhlaziyiwe kancinane, kubandakanya uyilo olutsha. Ezi ndaba zijolise ikakhulu kwimenyu ehlayo ngasekhohlo, kwaye iapp yam yeVodafone iphucule kakhulu ngokuhamba kohlaziyo.
Ndikhumbula unyaka wokuqala wesicelo sam seVodafone, ibingenakoyiswa ngokoqobo. Kungekudala emva koko, uyilo olutsha lwaphumelela, kodwa into eyayingahambi nentsebenzo, sazifumana sisicelo esicothayo nesifuna ukhuphelo oluninzi lwedatha (nangona xa sisebenzisa i-My Vodafone app idatha ayibizi mali). Kolu hlaziyo lwamva nje, emva kohlaziyo oluninzi olujolise ekusebenzeni, sifumana imenyu ehlayo ekhawulezayo nenomdla.
Yintoni eNtsha kuHlelo 4.0.0
Sinikezela imenyu entsha ebonakalayo ngakumbi kwaye inomdla!
Ukufikelela kuhlelo ngalunye lweVodafone yam kunokuba ngumsebenzi onzima kwixesha elidlulileyo.
Ngale nguqulo intsha, siphucula ukufikelela kulawulo lweemveliso zakho.
Qhubeka uthumela amagqabantshintshi asivumela ukuba siphucule kwaye sisondele kwinto oyifunayo.
Ngoku isicelo sisebenza ngokuzinza kancinci kwaye inyani kukuba imenyu eguqulweyo yayiyimfuneko, kuba ukuqokelelwa kweenketho kuyenze yangcungcutheka. Ihlala kwi-6,2 MB kuphela kwaye iyahambelana nayo nayiphi na isixhobo se-iOS ngaphezulu kwe-iOS 7.1Iya kusebenza phantse kuso nasiphi na isixhobo se-iOS esikhoyo. Thatha ithuba lokufumana okuninzi kuyo, kwaye ukhumbule ukuba iVodafone inika ii-GBs eziphindwe kabini ngenqanaba lehlobo, jonga kwicandelo "lokuPhucula".
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » IVodafone yam ihlaziywa yoyilo olutsha
Nika kude ulawule nokuba.
"Qalisa ukunyusa kwakho ngaphambi kuka-Agasti 31 kwaye uyiphindaphinde i-GB yakho kwi-invoyisi nganye kude kube nge-21 kaSeptemba nge- € 3. kuphela"
Andifuni nanye kwezi zinto zokubamba simberge
IMicrosoft Pix, isivumela ukuba sithathe imifanekiso kunye ne-iPhone phantse ngendlela yobungcali